Fanafihana sy vono olona teny By Pass: mpahandron’ny Gastro Pizza Analakely ny atidoha | NewsMada
Fanafihana sy vono olona teny By Pass: mpahandron’ny Gastro Pizza Analakely ny atidoha
Tafakatra enina ny isan’ny olona voasambotra manodidina ny fanafihana ny Gastro By Pass izay namoizana ain’olona roa lahy. I Rajo, chef cuisinier ao amin’ny La Gastro Pizza Analakely, efa niasa nandritra ny 15 taona, ihany ny atidoha nikotrika ity fanafihana ity.
Nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) sy ny Usi omaly, nanazavana momba ireo jiolahy nanao fanafihana sy famonoana nahafaty ireo mpiambina tao amin’ny Gastro Pizza eny By Pass, ny 27 aogositra lasa teo. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Usi, ny kaomisera Rakotomalala François, niantso izay olona mety hanana loharanom-baovao momba ity raharaha ity, taorian’iny vonoan’olona feno habibiana iny nataona andian-jiolahy saika hangalatra ny vatamafihidy « coffre fort » tao amin’ny Gastro Pizza By Pass, iny izy ireo. Niainga avy amin’ny tsy misy ny fanadihadian’ny polisy satria efa maty ireo mpiambina roa lahy, efa nongotan’ireo jiolahy ny “camera” mirakitra ny zava-nitranga teny an-toerana. Nahitam-bokany ihany anefa izany satria ny 29 aogositra, nahazo loharanom-baovao ny polisin’ny Usi fa misy olona atao hoe Pascal, anisan’ireo jiolahy nandray anjara tamin’ity fanafihana ity, ary fantatra fa lasa nitsoaka any Antsirabe izy. Nidina avy hatrany tany an-toerana ny polisy, saingy efa nifindra toerana any Ambondromisotra Ambatofinandrahana izy ka voasambotra tany izy, ny 30 aogositra 2018 tamin’ny 08 ora maraina. Mbola tratra teny aminy ny finday iray “flotte”-n’ny orinasa nampiasain’ireo mpiambina novonoina. Niaiky avy hatrany izy fa anisan’ireo nandray anjara tamin’ny fanafihana sy ny famonoana, nanondro ny namany ihany koa izy antsoina hoe i Rajo, “chef cuisinier” ao amin’ny Gastro Pizza Analakely, tena atidoha nikotroka ity fanafihana niharo famonoana ity. Nilaza kosa ny lehiben’ny sakelika fahadimy ao amin’ny polisy misahana ny heloka bevava, ny “officier principal de police”, Ratsimbaharijao Rinah Nirina, fa efa 15 taona niasana tao amin’ny Gastro Pizza ity Rajo ity ary mahafantatra ny antsipiriany rehetra momba ny fiaimpiainan’ny orinasa ka nahatonga azy hanao izao fihetsika feno habibiana izao.
Mbola misy olona hafa karohina…
Rehefa nanaovana fanadihadiana izy, niaiky fa tena anisan’ny nandray anjara tamin’ilay famonoana. Nanondro ny zaodahiny ihany koa izy, tompon’ny fitaovana saika hakana ilay vatamafihidy. Ny 4 septambra no voasambotra teny Mahamasina ity farany. Voasambotra ihany koa ny mpiambina miisa roa an’ny orinasa fa nampiahiahy ny fihetsiny. Nohamafisin’ny polisy fa taorian’ny fandevenana ireo roa lahy niharam-boina, nangataka “permission” izy roa lahy ireto. Tamin’ny fanadihadiana, voalaza fa tena mpandray anjara fototra tamin’ity fanafihana niharo vono olona ity ny roa tamin’ireo. Mbola misy ihany koa ireo karohina, araka ny tatitra avy amin’ny polisim-pirenena ka mangataka fiaraha-miasa amin’ny vahoaka. Natolotra ny Fampanoavana, androany, izy enina mirahalahy ireo, ary naiditra vonjimaika am-ponja avokoa. Andrasana ny fahatrarana ireo namany hafa. Tsiahivina fa maty notsatotsatohin-dry zalahy ny antsy teny Belambanana ny mpiasa iray rehefa nentin’izy ireo nitady ny tranon’ilay mpiasa mahafantatra ny teny miafina ahafahana mamoha ilay vatafamafihidy. Novonoin’izy ireo tao amin’ny trano fidiovana eny amin’ny Gastro Pizza By Pass kosa ilay mpiambina iray hafa.
Jean Claude sy Yves S.